Maalinta: Febraayo 9, 2019
Suuqa Saldhigga ee Jasiiradda İzmir ayaa la xiray
Mashruuca basaska korantada ee korantada u wanaagsan ee Manisa ee ku yaal Waddada Izmir inta u dhaxaysa Masaajidka Sheikh Fenari iyo Masaajidka rinjiga wadada Dugsiga Hoose ee Cumhuriyet ayaa laga fulin doonaa aagga. Dawlada Hoose ee Mawduuca ku saabsan mawduuca la sameeyay [More ...]
Eurasia Rail 10-12 waxay ka dhici doontaa carwada April 2019
Eurasia Rail, oo loo yaqaanno mid ka mid ah carwooyinka ugu waa weyn gobolka Eurasia iyo mid ka mid ah carwooyinka ugu waa weyn adduunka ee waaxyaha nidaamka tareenka, ayaa ah mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee qaybta nidaamka tareenka ee gobolka u dhexeeya 10-12 Abriil 2019 [More ...]
Wakhtiga baska Wi-Fi wuxuu bilaabmay Van
Degmooyinka Van Metropolitan, gudahooda 90 baska socda ee internetka bilaashka ah (Wi-Fi) ayaa bilaabmay. Sii wadida waxqabadyadeeda ku wajahan tikniyoolajiyadda, Dawladda Hoose ee Magaaladda waxay u fidisay adeeg cusub shacabka. Waaxda IT-ga iyo [More ...]
Laba Tareen Ayaa Lagu Dilay Barcelona 1 Dhimatay 100 Injured
Natiijada shilkii ka dhacay labada tareen ee isku socodka ah ee magaalada Barcelona, ​​Spain, dadka 1 ayaa la diley 100 dad ayaa waxoogaa dhaawac ah. Laba tareen oo kuwa rakaabka ah ayaa ku dhacay meel u jirta magaalada Barcelona ee xNUMX mile waqooyi-galbeed. Shilku wuxuu ku dhacay nolosha qofka [More ...]
Baska Magaalada kale ee Magaalada
Dowlada Hoose ee Konya, 11 Ilaa Isniinta, oo ku xiran Xarunta Dhaqdhaqaaqa Alakova, waxay ka shaqeyn doontaa inta udhaxeysa Alakova Quarter iyo Alaaddin Boulevard 76 No. Karatepe Gaza Street waxay bilaabi doontaa khadka cusub ee baska. Konya [More ...]
Gaadiidka farriimaha bulshada ee Kocaeli
Basaska Gaadiidka ay kujiraan farriimaha bulshada ee Park A.Ş. Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, Agaasinka Amniga ee Degmooyinka Kocaeli iyo Jaamacadda Kocaeli ayaa kala saxiixday mashruuc mas'uuliyad bulsho muhiim ah. mashruuca [More ...]
Gawaarida bilaashka ah ee laga soo wado Magaalooyinka waaweyn
Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa ayaa dhawaan laga furay aagaga 7 acre oo ku ag taal dhismaha dawlada hoose ee Nilufer waxayna si bilaash ah ugu adeegtay. [More ...]
Zonguldak-Filyos Tareenka Tikidhada Qiimaha
Xisbiga Dadka Jamhuuriga Zonguldak Kuxigeenka iyo xubin ka tirsan Komishanka SEE Deniz Yavuzyilmaz, 6 Diseembar 2018 ayaa lagu qabtay shirkii Kit Kit ee lagu qabtay TCDD, Zonguldak - Filyos tikidhada wadada tareenka waa qaali. [More ...]
Garoonka diyaaradaha ee Istanbul 3 187 oo Xousa iyo 553 ayaa rakibaya rakaabkii bishii
Agaasinka Guud ee Maamulka Duulista Hawada (DHMI), 2019 bishii Janaayo ee diyaaradaha diyaaradaha, rakaabka iyo tirakoobka xamuulka ayaa shaaca laga qaaday. Marka loo eego, bishii Janaayo ee 2019; Diyaaradda ayaa soo degaysa oo ka degeysa madaarrada [More ...]
No. adduunka ayaa, Turkish Airlines, xafladda ugu weyn ee sayniska Turkey ee Expo Science ka 2019 bilowdo hawsha arjiga tartanka mashruuca ah. Mawduuca ugu weyn ee dhacdada sanadkaan waa 'Warshadaha 4.0'. Duqa Magaalada Bursa [More ...]
Helitaanka Gawaarida ee Konya waxay bixisaa Fudud
Codsiga 'Bul Find Parking' ee ku yaal Codsiga Konya Mobile Konya ee loo yaqaan 'Konya Mobile Konya' ee Degmadda Magaalo Weyne ayaa u suurtagelisa darawalada inay arkaan saacadaha shaqada iyo heerka joogitaanka baarkinada ku yaal bartamaha magaalada. Gawaarida gawaarida iyadoo la adeegsanayo aaladda marinka [More ...]
Maanta taariikhda: 9 Febraayo 1857 Constanta - Boğazköy Bugün
Maanta oo ah Taariikhda 9 Febraayo 1857 Waxaa jira rabitaan ah in khadka Constanta - Boğazköy (Chernovada) la siiyay koox Ingiriis ah.